Apartment Sale (ID-238) အား အလုံ တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Apartment for sale in Ahlone Township, near Sin Min Market. 1500 sqft living area, organized by Attic,Living-room, One Bed-room, Kitchen and Bath-room.
Asking Price - 4000 Lakhs (Nego)
အလုံမြို့နယ်၊ ဆင်မင်းဈေးသို့ သွားရောက်ရန်နီးသည့် နေရာတွင်တည်ရှိသော ရောင်းရန်တိုက်ခန်းဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ခန်းအကျယ် ၁၅၀၀ စတုရန်းပေရှိပြီး ဧည့်ခန်း၊ ထပ်ခိုး၊ အိပ်ခန်း တစ်ခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများ ဖွဲ့စည်းပါဝင်ပါသည်။
တိုက်ခန်း၏အရောင်းဈေးနှုန်း - သိန်း ၄၀၀၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
အမည်: Apartment Sale (ID-238)